बिश्व अर्थतन्त्र दस बर्षसम्म मन्दीमा रहने ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > अर्थ तथा ब्यापार > बिश्व अर्थतन्त्र दस बर्षसम्म मन्दीमा रहने !
बिश्व अर्थतन्त्र दस बर्षसम्म मन्दीमा रहने !
May 23, 2020 May 23, 2020 GRISHI251
बिख्यात अर्थशास्त्री नुरियल रुबिनीले कोरोना भाईरसको कारण अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व आर्थिक मन्दी आउने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको प्रभावबाट उब्रिएपनि त्यसको असर भने विश्व अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म देखिने छ। महामारीको असरले विश्व अर्थतन्त्र १० वर्षसम्म मन्दीमा रहने र गुमेका केही जागिरहरू कहिल्यै नफर्कने उनको ठहर छ।
गुमेका केहि रोजगारीहरू आंशिक रूपमा मात्र फर्किने र फर्किए पनि कम तलब र आंशिक रोजगारीका रूपमा विस्तारै आउने छ । उनले रोजगारी असुरक्षा हुनेछ र औसत मानिसका लागि आम्दानी र ज्याला अझै कम हुने पनि दाबी गरेका छन्।
उनी भन्छ्न्- पसल र व्यवसाय खुले पनि व्यापार पहिलाकै स्तरमा आउनेछैनन् । बिश्वब्यापी रुपमा अधिकांश पसलहरू अझै खाली छन् । आधा उडान बन्द छ । अन्यत्र कहिँ कतै पसल खुले पनि मानिसहरु किनमेल गर्न नजान सक्ने उनले औंल्याएका छन् ।
बीबीसीको टकिङ एशिया कार्यक्रमा ब्यक्त उनको धारणाले यतिखेर बिश्वब्यापी चर्चा पाएको छ।
अर्थमन्त्रीका ज्वाईं नारानलाई लकडाउनमा पनि भ्याइनभ्याइ